ကုမ်ရာသီဖွားတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များ - Lifestyle Myanmar
နက္ခတ်ဗေဒင်အရ ကုမ်ရာသီခွင်သင်္ကေတမှာ မွေးဖွားသူအတွက် ဘယ်အလုပ်အကိုင်တွေက အကောင်းဆုံးဖြစ်သလဲ?
သင့်ရာသီခွင်အတွက် ဘယ်အလုပ်က အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်စေဖို့ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဇာတာခွင်က ကူညီနိုင်ပါတယ်။ သိပ္ပံ၊ ဆေးပညာနယ်ပယ် (သို့) နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပါဝင်သော အလုပ်အကိုင်တွေက ကုမ်ရာသီဖွားတွေအတွက် အံ့သြဖွယ်အလုပ်များဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုကို လိုက်ရှာရခြင်းက ငြီးငွေ့စရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်အရမ်းငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါ ဘာ့ကြောင့်ဒီအလုပ်ကို ငါလျှောက်ခဲ့မိတာလဲလို့ တွေးမိနေနိုင်ပါတယ်။ သင်နှင့်အတူ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကြောင့်လား(သို့) ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လား? အလုပ်က သင့်ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာနဲ့ သဟဇာတမဖြစ်တာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကုမ်ရာသီတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘာရည်မှန်းချက်ပဲရှိရှိ သင့်စွမ်းအင်ကို တိုးတတ်မှုပေါ်မှာသာ အမြဲတမ်းအာရုံစိုက်ပါတယ်။ အလုပ်အတွက်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ရဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့ အတွေးဖြစ်စဉ်ကို အားပေးတဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို Welcome လုပ်ပါတယ်၊ သင့်စားပွဲပေါ်ရောက်လာတဲ့ စီမံကိန်းတိုင်းကို သင်ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်ကြောင်း အမြဲတမ်းသက်သေပြပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်ခွင်မှာ ကုမ်ရာသီဖွားတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဆိုးကျိုးကတော့ သင်ဟာ အလုပ်ခွင်မှာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဖန်တီးလေ့ရှိတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် temwork ကသင့်အလုပ်မှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ သီးခြားနေထိုင်တတ်တဲ့ ကုမ်ရာသီခွင်တွေ အတွက်တော့ တကယ့်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သင်ဟာ ဒီအလုပ်ခွင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေရာတစ်နေရာ ရလာတဲ့အခါ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီအဆိုးမြင်ဝါဒတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်အလုပ်က ကုမ်ရာသီဖွားတွေအတွက် ဘာ့ကြောင့်ကောင်းတာလဲ?
လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောရတာကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သရုပ်ဆောင်အလုပ်က ကုမ်ရာသီတွေအတွက် ကောင်းတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တာ မဆန်းပါဘူး။ သင့်ရဲ့ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ သဘာဝသိချင်စိတ်တို့ကြောင့် ဒီအရာက သင့်အားတိုးတတ်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး သင့်အား အမှန်ကတယ် ဇာတ်ကောင် ဖြစ်လာစေဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
၂။ ကွန်ပျူတာ ဂရိုဂရမ်မာ
ဒါက ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ အရာတစ်ခုခုနဲ့ အလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာ ပြဿနာအားလုံးကို ထူးခြားစွာ ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ သင့်စွမ်းရည်ကြောင့်ပဲ ဒီအလုပ်က သင်နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်အမှားတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ သီအိုရီတွေကို ဖြိုဖျက်ခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ပရိုဂရမ်မာအလုပ်ဟာ သင်လွတ်လပ်စွာ လုပ်နိုင်မယ့် အလုပ်တစ်ခုဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ပြဿနာရဲ့ အနှစ်သာရကို စူးစမ်းလေ့လာတတ်တဲ့ သင့်ရဲ့သိလိုစိတ်ကို လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခြင်းဖြင့် အားပေးပါတယ်။ ဒီအလုပ်က သင့်အား ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အတူ ဝါယာကြိုးတွေရဲ့ ရှုပ်ထွေးသော အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့နဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖြေရှင်းချက်တွေကို ဆန်းစစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ တစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ရမှာ ငြီးငွေ့ပြီး အကောင်းဆုံးတွေကိုလုပ်ဖို့ တခြားသူတွေဆီက အားပေးမှုကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် စီမံကိန်းမန်နေဂျာက အကောင်းဆုံးသော အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ယောက်တည်း (သို့) အခြားသူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုတဲ့ အခြားနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနတစ်ခုအတွက် လိုအပ်ချက်တွေက plan တစ်ခုကို ဖန်တီးခြင်း၊ သုတေသနအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း၊ သင့်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို သုတေသနမှာ အာရုံနှစ်ထားခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ကုမ်ရာသီဖွားတွေအတွက် ကျောင်းဆရာအလုပ်က ဘာ့ကြောင့်ကောင်းတာလဲ?
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်ပလက်ဖောင်းပဲဖြစ်နေပါစေ သင်ဟာ သင်ယူလေ့လာရတာကို နှစ်သက်ပြီး အခြားသူတွေကို ဗဟုသုအသစ်တွေ မျှဝေချင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကြောင့် ဆရာတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကောင်းတဲ့ ပုံသေကားကျပုံစံ ရှိနေပေမယ့်လည်း ကျောင်းသားတွေအပေါ်မှာတော့ ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။